IPerito Moreno Glacier: izici, isimo sezulu, izimbali nezilwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Emhlabeni wethu kunezimangaliso zemvelo okufanele sizibone. Enye yazo yi- IPerito Moreno Glacier. Kuyinto enkulu yeqhwa etholakala esifundazweni saseSanta Cruz futhi ihlanganiswe neLos Glaciares National Park. Ukuguquka kwesimo sezulu kubangela ushintsho olukhulu kulesi siqhwa futhi kuyancipha.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngePerito Moreno Glacier, izici zayo, ukwakheka nokubaluleka kwayo.
2 Isimo sezulu ePerito Moreno Glacier
3 Izimbali nezilwane zePerito Moreno Glacier
4 Ukuqhuma kanye neqembu
Ukuqhubekela phambili kwaleli bhulokhi elikhulu leqhwa kumele iBrazo Rico etholakala eLake Argentino. Ingafinyelela ubude obungamamitha angama-30 ukuphakama kunalo lonke ichibi, icindezele kakhulu iqhwa elikhona.
Ungabona umhubhe onegumbi le- ngaphezu kwamamitha angama-50 lapho amanzi egeleza khona aze afike eLake Argentino. Ngenxa yokuguguleka okubangelwe yile ndawo, i-vault ekugcineni iyawa. Lesi ngesinye seziboniso ezinhle kakhulu ezingafakazelwa, yingakho izivakashi kufanele zikhokhe izizumbulu zemali ukuze zikwazi ukuphasa noma zingakaze zibe nosuku.
Kuyinqubo engokwemvelo ephindaphindwe ngokungajwayelekile eminyakeni edlule. Ukwahlukana kokugcina okurekhodiwe kwenzeka ngoMashi 2016. NgoMashi 2018, kwaba nekhefu elisha ePerito Moreno Glacier, kepha kwenzeka ekuseni. Ngeshwa, azikho izithombe noma amarekhodi evidiyo ahlobene nalesi sehlakalo ebengatholwa ngoba ipaki ibivaliwe ngaleso sikhathi futhi bekungekho nofakazi noma ofakazi.
Ngosuku nje ngaphambi kokuqhekeka, inguzunga yeqhwa yayilahlekelwe yizingxenye ezimbili kwezintathu zevolumu yayo, okukhombisa ukuthi ngalowo nyaka (2018) lesi simo senzeka ngokushesha okukhulu kunakwiminyaka edlule, kodwa abukho ubufakazi okwamanje. Lokhu kungenxa yokushisa komhlaba kanye nokuguquka kwesimo sezulu okwenzeke iminyaka eminingana.
Abanye ososayensi abafunde isikhathi eside ngePerito Moreno Glacier banesiqiniseko sokuthi leli qiniso limane laqondana nje futhi alihlangene nakancane nokwenzekayo emvelweni, ngoba izinguzunga zeqhwa azikaze ziboniswe ukuthi zithintekile ukuguquka kwesimo sezulu, futhi lapho izinguzunga zeqhwa sezihambile zaya emfushane.
Isimo sezulu ePerito Moreno Glacier
Isimo sezulu somile futhi siyabanda, futhi imvula yonyaka ingama-300 mm kuphela. Kodwa-ke, epaki kazwelonke edumile, itholakala kude nentshonalanga lapho kutholakala khona iPerito Moreno Glacier, nemvula icebile kakhulu, cishe ngama-1500 mm ngonyaka.
Uma kuqhathaniswa nethafa lasePatagonian elikuyo, izindawo zalo eziningi ziyinikeza isimo sezulu esincanyana. Itholakala osebeni lweLake Argentino, emthambekeni obheke enyakatho futhi ivikelwe amahlathi aqhubekayo. Isimo sezulu somile kanti nezinga lokushisa liyaguquguquka phakathi kuka-20º C ehlobo nangaphansi kuka -3º C ebusika.
Izinga lokushisa liyahluka kakhulu kuye ngesikhathi sonyaka, ngoba ehlobo ungakujabulela ukukhanya okungamahora ayi-17, kanti emini ebusika kufushane kakhulu, ngamahora ayi-8 kuphela.
Izimbali nezilwane zePerito Moreno Glacier
Cishe amahektha angama-260.000 aleli paki ambozwe yiqhwa, ngakho-ke azikho izimila, futhi cishe Amahektha angama-95.000 nawo ambozwe amachibi. Yonke le ndawo enamapulangwe ingamahektha angama-79.000, okubusa kuyo i-cherry, ñire nelenga.
Izimbali ezitholakala eLos Glaciares National Park zihambisana nesifunda esiseningizimu yeMagallanes. I-notro ingesinye sezihlahlana ezithinta kakhulu, inezimbali ezinhle ezibomvu. I-El Calafate enezithelo ze-violet nezimbali eziphuzi iyamangalisa impela, ngenkathi isendaweni enomswakama womoya ophakeme i-elderberry's devil's edumile iyathandeka.
Ngokuphathelene nezilwane, leli paki linezinhlobo ezithile zezindawo ezinotshani namahlathi angaphansi komhlaba. Kubusa ubukhona bokhozi olumnyama, amanqe, ama-guanacos, ama-choique nama-puma. Akukho lwazi oluningi olwaziwayo ngezinhlobo zama-vertebrate ezihlala kuyo yonke le paki. Imininingwane eminingi enjalo itholakala ezinyonini.
Ukuqhuma kanye neqembu
Ukuqhekeka kwalesi siqhwa kungenye yezibuko ezihlaba umxhwele kakhulu emvelweni. Kodwa-ke, ayikho ipharamitha yezikhathi ezithile yokwazi ukuthi kunini isikhathi sekhefu. Izivakashi eziningi zikhokha imali enkulu ukuze zikwazi ukubona ikhefu, yize zingazi kahle ukuthi kuzoba nini.
Lezi zinguzunga zeqhwa zingavakashelwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Kuya ngesikhathi sonyaka osivakashelayo, uzokuthola ngezindlela ezihlukile, ezihlukile futhi ezivelele. Noma kunjalo, Kumele kuqashelwe ukuthi isimo sezulu eqhweni liyabanda futhi somile isikhathi esiningi.
Kubalulekile ukucabangela izinga lokushisa, ngoba ezinyangeni zasebusika kusuka ngoJuni kuya ku-Agasti abantu abakajwayele ukuthi kubande kakhulu, ngaphezu kweqiniso lokuthi izinsuku ngokuvamile zifushane futhi akuyona yonke imisebenzi yokuzijabulisa yangaphandle engenzeka. Izinga lokushisa elijwayelekile ngu- -2º C. Ebusika, ungajabulela i-panorama embozwe yiqhwa, futhi ungazijabulisa futhi udlale eqhweni. Ngesikhathi sehlobo phakathi kukaDisemba noMashi, ukushisa kushintsha ngokungazelelwe kube cishe ngu-15ºC.
Okuningi kwezinguzunga zeqhwa ezingama-49 ezakha iPatagonia eseningizimu baqale ukubuyela emuva eminyakeni engama-50 edlule. Lokhu kubangelwa ukuguquguquka kwesimo sezulu futhi kungumthwalo ophelele wesintu, ngoba ngabantu ababangela izinkinga zemvelo futhi babangele ukushisa komhlaba. IPerito Moreno Glacier ingelinye lamaqhwa eqhwa angancibiliki ngaphansi kwezimo zokufudumala kwembulunga yonke nezinguquko kwezemvelo. Futhi ayikhuli amamitha ama-3 ngosuku ngokwenkolelo yendawo. Le glacier ibhekene nomjikelezo wokuqongelela nokuhlangana okugcina ibhalansi ephelele phakathi nenqubo.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngePerito Moreno Glacier, izici zayo kanye nomthelela ongaba khona wokuguquka kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » IPerito Moreno Glacier